Otu esi enyocha arụmọrụ Organic Search (SEO) gị | Martech Zone
N'ịrụ ọrụ iji melite arụmọrụ Organic nke ụdị saịtị ọ bụla - site na saịtị mega nwere ọtụtụ nde ibe, gaa na saịtị ecommerce, ruo obere azụmahịa na mpaghara, enwere usoro m na -enyere na -enyere m aka inyocha ma kọọ arụmọrụ ndị ahịa m. N'ime ụlọ ọrụ na -ere ahịa dijitalụ, ekwetaghị m na ụzọ m si pụọ iche…SEO) ụlọ ọrụ. Usoro m esighị ike, mana ọ na -eji ọtụtụ ngwaọrụ yana nyocha ezubere iche maka onye ahịa ọ bụla.
Ngwaọrụ SEO maka nlekota oru nyocha ọchụchọ
Njikwa Nchọta Google - chee maka Google Search Console (nke a na -akpọbu ngwa ọrụ webmaster) dị ka ikpo okwu nyocha iji nyere gị aka nyochaa ọhụhụ gị na nsonaazụ ọchụchọ. Google Search Console ga -achọpụta nsogbu dị na saịtị gị ma nyere gị aka inyocha ọkwa gị ruo n'ókè. Ekwuru m "ruo n'ókè" n'ihi na Google anaghị enye data zuru oke maka ndị ọrụ Google banyere. Ọzọkwa, achọtala m njehie ụgha ole na ole na njikwa na -apụta wee pụọ. Ọzọkwa, ụfọdụ mperi ndị ọzọ anaghị emetụta arụmọrụ gị nke ukwuu. Nitpicking nsogbu Google Search Console nwere ike tufuo nnukwu oge… yabụ kpachara anya.
Google Analytics - Nchịkọta ga -enye gị data onye ọbịa n'ezie ma ị nwere ike kewaa ndị ọbịa gị ozugbo site na ebe ị nweta iji nyochaa okporo ụzọ organic gị. Ị nwere ike mebie nke ahụ ka ọ bụrụ ndị ọbịa ọhụrụ na -alọta. Dị ka ọ dị na igwe njikwa ọchụchọ, nchịkọta adịghị ekpughere data nke ndị ọrụ abanyela na Google yabụ mgbe ị mebisiri data ahụ n'ime mkpụrụokwu, isi mmalite, wdg. Ebe ọtụtụ mmadụ batara na Google, nke a nwere ike iduhie gị.
Azụmaahịa Google - Search results peeji nke (ỌRỤ. Azụmaahịa Google na -achịkwa ngwugwu maapụ dabere na aha gị (nyocha), izi ezi nke azụmahịa azụmaahịa gị, na ugboro ole nke posts na nyocha gị. Azụmaahịa mpaghara, ma ọ bụ ụlọ ahịa na -ere ahịa ma ọ bụ onye na -eweta ọrụ, ga -ejikwa profaịlụ azụmahịa Google ha nke ọma ka ọhụhụ nke ukwuu.
Nchịkọta ọwa YouTube - YouTube bụ igwe ọchụchọ nke abụọ kachasị na enweghị ihe ngọpụ ịghara ịnọ ebe ahụ. E nwere tọn iri ụdị vidiyo dị iche iche na azụmahịa gị kwesịrị ịdị na -arụ ọrụ iji kpụga okporo ụzọ organic na vidiyo na ụzọ ntụgharị site na YouTute gaa na saịtị gị. Agaghị ekwu na vidiyo ndị ahụ ga -eme ka ahụmịhe ndị ọbịa gị na webụsaịtị nke gị. Anyị na -agbalị ịnwe vidiyo dị mkpa na ibe ọ bụla nke saịtị azụmahịa iji mee ka ndị ọbịa nwee ekele maka ya karịa ịgụ ọtụtụ ozi na ibe ma ọ bụ isiokwu.
SEMrush - E nwere ọtụtụ ndị mara mma SEO ngwaọrụ nọ ebe ahụ maka nchọta organic. Ejirila m SEMrush ruo ọtụtụ afọ, yabụ na anaghị m achọ ịmanye gị karịa otu n'ime ndị ọzọ nọ ebe ahụ ... Achọrọ m ijide n'aka na ị ghọtara na ị ga-enwe nweta ngwaọrụ ndị a iji nyochaa arụmọrụ nchọta organic gị n'ezie. Ọ bụrụ na ị mepee ihe nchọgharị wee malite ilele ibe nsonaazụ ọchụchọ (ỌRỤ) ị na -enweta nsonaazụ nkeonwe. Ọbụlagodi na ịbanyeghị na na windo nkeonwe, ọnọdụ gị nwere ike imetụta nsonaazụ ị na -enweta na Google ozugbo. Nke a bụ mmejọ m na -ahụkarị ka ndị ahịa na -eme mgbe ha na -elele arụmọrụ nke ha ... Ngwaọrụ dị ka nke a nwekwara ike inyere gị aka ịchọpụta ohere maka ijikọ ndị na -ajụ ase dị ka video, ma ọ bụ na -emepe emepe ọgaranya snippets banye na saịtị gị iji melite ọhụhụ gị.
Ọdịiche dị na mpụga nke na -emetụta okporo ụzọ anụ ahụ
Ịnọgide na -enwe ọhụhụ dị elu na nsonaazụ ọchụchọ na okwu ọchụchọ dị mkpa dị mkpa maka ọganiihu ahịa dijitalụ nke azụmahịa gị. Ọ dị mkpa iburu n'uche na SEO abụghị ihe ọ bụla eme… Ọ bụghị oru ngo. Maka gịnị? N'ihi mgbanwe ndị dị na mpụga nke njikwa gị:
Enwere saịtị na -asọrịta mpi megide gị maka ọkwa dị ka akụkọ, akwụkwọ ndekọ aha, na saịtị ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha nwere ike merie ọchụchọ ndị dị mkpa, nke ahụ pụtara na ha nwere ike ịkwụ gị ụgwọ maka ịnweta ndị na -ege ha ntị - ma ọ bụ na mgbasa ozi, nkwado, ma ọ bụ ebe a ma ama. Ezigbo ihe atụ bụ Yellow Pages. Peeji na -acha odo odo chọrọ imeri nsonaazụ ọchụchọ nke enwere ike ịchọta saịtị gị ka a manye gị ịkwụ ha ụgwọ ka iwelie ọhụhụ gị.
Enwere ụlọ ọrụ na -emegide azụmahịa gị. Ha nwere ike na -etinye nnukwu ego na ọdịnaya yana SEO iji nweta ọchụchọ dị mkpa ị na -asọ mpi.
Enwere ahụmịhe onye ọrụ, mgbanwe ogo algorithmic, yana nnwale na -aga n'ihu na -eme na igwe ọchụchọ. Google na -agbalị mgbe niile ịkwalite ahụmịhe ndị ọrụ ha yana hụ na ọchụchọ dị mma. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike nweta nsonaazụ ọchụchọ otu ụbọchị wee bido tufuo ya na -esote.
Enwere usoro ọchụchọ. Ngwakọta isiokwu nwere ike ịbawanye na ibelata na ewu ewu ka oge na -aga, okwu nwere ike gbanwe kpamkpam. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ nrụzi HVAC, dịka ọmụmaatụ, ị ga -agbago elu na AC n'oge ihu igwe ọkụ na okwu ọkụ na ihu igwe oyi. N'ihi nke a, ka ị na-enyocha okporo ụzọ ọnwa gị karịrị ọnwa, ọnụọgụ ndị ọbịa nwere ike gbanwee nke ukwuu.
Ụlọ ọrụ SEO gị ma ọ bụ onye na -enye ndụmọdụ kwesịrị ịdị na -egwu ala na data a ma na -enyocha n'ezie ma ị na -eme nke ọma na mgbanwe ndị a dị na mpụga.
Nlekota isiokwu ndị dị mkpa
Ị nwetala oghere SEO ebe ndị mmadụ na -ekwu na ha ga -enweta gị na Page 1? Ugh… hichapụ oghere ndị ahụ ma enyekwa ha oge nke ụbọchị. Onye ọ bụla nwere ike ịkwado na ibe 1 maka okwu pụrụ iche… Ihe na-enyere ndị ọchụnta ego aka ka ha na-arụpụta nsonaazụ organic bụ ị nweta ego na-enweghị akara, okwu dị mkpa na-eduga onye ahịa nwere ike ịbanye na saịtị gị.
Keywords Isi - Ọ bụrụ na ị nwere aha ụlọ ọrụ pụrụ iche, aha ngwaahịa, ma ọ bụ ọbụna aha ndị ọrụ gị… M ka mma n'ọkwa Martech Zone… Ọ bụ aha pụrụ iche mara mma maka saịtị m nke nọrọla kemgbe ihe karịrị afọ iri. Ka ị na-enyocha ọkwa gị, ekwesịrị inyocha mkpụrụokwu akara akara vs. mkpụrụokwu ndị na-enweghị akara iche iche.
N'ịtụgharị Keywords -Ọ bụghị mkpụrụokwu niile na-abụghị akara nwere mkpa, ma. Ọ bụ ezie na saịtị gị nwere ike nọrọ n'ọkwa narị narị okwu, ọ bụrụ na ha anaghị ebute okporo ụzọ dị mkpa nke na -etinye aka na ika gị, gịnị kpatara nsogbu? Anyị eburula ibu ọrụ SEO maka ọtụtụ ndị ahịa ebe anyị belatara okporo ụzọ organic ha ka anyị na -abawanye mgbanwe ha n'ihi na anyị na -elekwasị anya na ngwaahịa na ọrụ ụlọ ọrụ ga -enye!
Ihe ndị dị mkpa - Otu atụmatụ dị mkpa n'ịzụlite a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya na -enye ndị ọbịa gị uru. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ndị ọbịa niile nwere ike bụrụ ndị ahịa, ịbụ ibe zuru oke ma na -enyere aka na isiokwu nwere ike wulite aha na mmata nke akara gị n'ịntanetị.
Anyị nwere onye ahịa ọhụrụ etinyela puku kwuru iri puku na saịtị na ọdịnaya n'ime afọ gara aga ebe ha nọ n'ọtụtụ narị okwu ọchụchọ, na enwebeghị mgbanwe site na saịtị ahụ. Ọtụtụ ọdịnaya adịghị eche maka ọrụ ha akọwapụtara nke ọma… Lee ihe efu nke itinye mgbalị! Anyị wepụrụ ọdịnaya ahụ ebe ọ bụ na ha abaghị uru nye ndị na -ege ntị ha na -agbalị iru.
Nsonaazụ ahụ? Edebere isiokwu ndị pere mpe… na nnukwu dịkwuo n'ime okporo ụzọ nchọta ihe ọkụkụ dị mkpa:
Ọnọdụ nleba anya dị oke mkpa na arụ ọrụ nchọta ihe
Ka saịtị gị na -agagharị n'oké osimiri weebụ, a ga -enwe mgbago na mgbada kwa ọnwa. Anaghị m elekwasị anya na ọkwa ozugbo na okporo ụzọ maka ndị ahịa m, ana m akwali ha ka ha lelee data n'oge.
Ngụ nke mkpụrụokwu site n'ọkwa karịrị oge - Ịbawanye ọkwa peeji chọrọ oge na ume. Ka ị na -akwalite ma kwalite ọdịnaya ọdịnaya ibe gị, kwalite ibe ahụ, ndị mmadụ na -ekerịta ibe gị, ogo gị ga -abawanye. Ọ bụ ezie na ọnọdụ atọ kachasị elu na ibe 3 dị mkpa n'ezie, ibe ndị ahụ nwere ike malitela na peeji nke 1. Achọrọ m ijide n'aka na edepụtara ibe saịtị ahụ nke ọma na ogo m na -aga n'ihu na -eto. Nke ahụ pụtara na ọrụ anyị na -arụ taa nwere ike ọ gaghị akwụghachi ụgwọ na ntụgharị na ntụgharị ruo ọtụtụ ọnwa… Jide n'aka kewaa nsonaazụ ndị a n'ime akara dị mkpa na nke enweghị akara dị ka ekwurịtara n'elu.
Onu ogugu nke ndi obia nlekota onwa kariri otu onwa - N'iburu n'uche usoro oge maka okwu ọchụchọ metụtara azụmahịa gị, ịchọrọ ilele ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa nke saịtị gị na -enweta site na igwe ọchụchọ (nke ọhụrụ na nke na -alọta). Ọ bụrụ na usoro ọchụchọ na -agbanwe agbanwe kwa ọnwa, ị ga -achọ ịhụ mmụba nke ndị ọbịa. Ọ bụrụ na ọnọdụ ọchụchọ agbanweela, ị ga -achọ inyocha ma ị na -eto n'agbanyeghị usoro ọchụchọ. Ọ bụrụ na ọnụọgụ ndị ọbịa gị dị larịị, dịka ọmụmaatụ, mana usoro ọchụchọ agbadala maka mkpụrụokwu dị mkpa… ị na -eme nke ọma n'ezie!
Onu ogugu nke ndi obia na -eleta kwa onwa n'afo n'afo - N'iburu n'uche usoro oge maka okwu ọchụchọ metụtara azụmahịa gị, ị ga -achọkwa lelee ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa nke saịtị gị na -enweta site na ngwa ọchụchọ (nke ọhụrụ na nke na -alọta) ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Oge ihe omume na -emetụta ọtụtụ azụmaahịa, yabụ inyocha ọnụọgụ ndị ọbịa gị kwa ọnwa ma e jiri ya tụnyere oge gara aga bụ ụzọ dị mma iji hụ ma ị na -emeziwanye ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ igwu n'ime hụ ihe kachasị mkpa.
Ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị site na okporo ụzọ Organic - Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ndụmọdụ gị anaghị ejikọ okporo ụzọ na ọnọdụ na nsonaazụ azụmaahịa n'ezie, ha na -ada ada gị. Nke ahụ apụtaghị na ọ dị mfe ime… ọ bụghị. Njem ndị ahịa maka ndị na -azụ ahịa na azụmaahịa adịghị ọcha ụlọ nkwonkwo ahịa dị ka anyị ga -achọ iche. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike kee nọmba ekwentị ma ọ bụ arịrịọ weebụ na isi mmalite, anyị na -agbasi ndị ahịa anyị ike ka ha wuo usoro ọrụ ọkọlọtọ nke na -edekọ isi mmalite ahụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere agbụ eze, dịka ọmụmaatụ, na -ajụ ndị ahịa ọhụụ otu ha siri nụ maka ha… ọtụtụ na -ekwu ugbu a Google. Ọ bụ ezie na nke ahụ adịghị iche n'etiti mkpọ maapụ ma ọ bụ SERP, anyị maara na mbọ anyị na -etinye maka ha abụọ na -akwụ ụgwọ.
Ilekwasị anya na ntọghata na -enyekwara gị aka ebuli maka mgbanwe! Anyị na-akwalite ndị ahịa anyị ka anyị tinyekwuo nkata ndụ, pịa oku, ụdị dị mfe, na onyinye iji nyere aka ịbawanye ọnụego mgbanwe. Kedu ihe dị elu ma na -eto okporo ụzọ organic gị ma ọ bụrụ na ọ naghị akwọ ụgbọ ala na ntụgharị ọzọ?!
Ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịtụgharị onye ọbịa organic ka ọ bụrụ onye ahịa ugbu a, ị ga -ebugakwa usoro ịzụlite nwere ike inyere ha aka ịnyagharịa njem ndị ahịa ka ha bụrụ otu. Anyị hụrụ akwụkwọ akụkọ n'anya, mkpọsa mkpọsa, ma na-enye ntinye aka iji rata ndị ọbịa ịlaghachi.
Akụkọ ọkọlọtọ SEO agaghị agwa akụkọ niile
Aga m eme ihe n'eziokwu na anaghị m eji usoro ọ bụla dị n'elu emepụta akụkọ ọ bụla. Ọ dịghị ụlọ ọrụ abụọ yiri ibe ha, m na -achọkwa ị attentiona ntị nke ọma na ebe anyị nwere ike ị nweta nnukwu ego na ịkọwapụta atụmatụ anyị karịa iicomi saịtị asọmpi. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ hyperlocal, dịka ọmụmaatụ, nyochaa uto okporo ụzọ ọchụchọ nke mba ụwa agaghị enyere gị aka, ọ bụ? Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ na -enweghị ikike, ịnweghị ike iji onwe gị tụnyere saịtị na -emeri nsonaazụ ọchụchọ kacha elu. Ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ obere azụmaahịa nwere oke mmefu ego, ịkọ akụkọ na ụlọ ọrụ nwere mmefu ahịa ahịa nde dollar adịghị mma.
Achọrọ data nke ndị ahịa ọ bụla ka amachachaa, kewaa ha, ma lekwasị anya na ndị na -ege ha ntị na ndị ahịa ha ka ha wee nwee ike bulie saịtị ha ka oge na -aga. Ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ndụmọdụ gị ga -aghọtarịrị azụmaahịa gị, onye ị na -eresị ya, ihe ndị na -agbanwe agbanwe gị, wee tụgharịa ya na dashboards na metrik dị mkpa!
Ngosi: Abụ m mmekọ SEMrush m na -ejikwa njikọ mmekọ anyị na akụkọ a.
Tags: ika KeywordsKeywords gbanwereGoogle Analyticsazụmahịa googleọnọdụ isiokwuisiokwu ogoisiokwu rankingsKeywordsKeywords na-enweghị akarantụgharị organicokporo ụzọ okporo ụzọmgbanwe okporo ụzọ organicndị ọbịa organicmkpa Keywordssearch engine njikarịchaokwu ọchụchọsemrushAarụmọrụ seoakụkọ seoseo ngwaọrụyoutubeNchịkọta ọwa YouTubeNchọgharị YouTube